Ifulethi IL FIENILE - Casa Pioncla Apartments - I-Airbnb
Ifulethi IL FIENILE - Casa Pioncla Apartments
Malosco, Trentino-Alto Adige/Südtirol, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Alessandra
Ifulethi i-Il Fienile lifakwe ngesitayela saseTyrolean ngokunakekela nothando ngemininingwane ebheke esigodini kanye neBrenta Dolomites. Ingakwazi ukuhlalisa abantu ababili kuya kwabahlanu futhi ifakwe konke ukunethezeka.
Ifulethi i-Il Fienile isendaweni engaphansi kwe-attic, ezindaweni ezihloselwe ukugcina utshani besizini yasebusika, futhi ithokozela umbono othokozisayo wesigodi kanye neBrenta Dolomites.
Ifulethi lisesitayela se-Alpine elinikezwe ukunakekelwa nothando ngemininingwane futhi lingahlalisa abantu aba-2 kuye kwabangu-5. Ine, kumamitha-skwele angama-70, igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili kanye negumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili (ohlukanisekayo) nombhede owodwa. Igumbi lokuphumula elinethezekile linetafula lokudlela kanti ithala lifakwe itafula nezihlalo. Ikhishi elihlome ngokuphelele futhi elihlome ngokuphelele elinohhavini, ifriji elinendawo yamafriji, umshini wokuwasha izitsha, imicrowave. Indlu yokugezela inobhavu nomshini wokuwasha.
Gcwalisa nge-TV eneziteshi ngesi-Italian nesiJalimane, ukufinyelela kwe-inthanethi kwamahhala.
Kukhona i-ayina nebhodi loku-ayina, isicoci se-vacuum esitholakalayo, kanye nesicelo sesihlalo esiphezulu sezingane nombhede.
Abangane abancane abanemilenze emine bamukelekile, ngesivumelwano nabanikazi.
Intengo ihlanganisa ukunikezwa kokuqala kwelineni lombhede, amathawula namathawula asekhishini. Ukushintsha ilineni ngesicelo nangenkokhelo.
Amathuba okupaka eduze kwendlu.
Izinga eliyisisekelo ngelabantu ababili, umuntu ngamunye owengeziwe uzobalwa ngokwehlukana.
Ukuhamba okuningi nokuvakasha kwakho konke okuthandayo nabo bonke ubunzima kwabancane nabadala. Futhi ezindaweni eziseduze nezitebele zokugibela, igalofu, ukugibela amatshe, ukudoba kwezemidlalo nezindlela zamabhayisikili asezintabeni kanye nenqwaba yezindawo ezikhangayo zemvelo okugqama phakathi kwazo iRio Sass Canyon.